Saturday December 05, 2015 - 22:54:02 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info - Maalmo colaado dhiig ku daatay ka dhaceen Mudug kadib ayaa la ogaanayaa in dagaaladda dhacaayay oo dhan ay ku dhisnaayeen Riwaayad siyaasadeed ay si wadajira u jilayeen Cabdiweli Gaas iyo Cabdikariim Xuseen Guled oo horey ugu heshii
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa la xaqiijiyay inuu seddex Milyan oo dollar kooxda Damujadiid ka qaatay hasse yeeshee waxaa ku adkaatay inuu aqoonsado Galmudug kadib markii baarlamaanka Puntland diiday.
Cabdiweli Gaas oo xaalad ku cuslaatay ayaa go-aansaday inuu ka faa-iideeysto fursad uu ka dhex arkay dagaalka Galkacyo taas oo aheyd farsamo uu hubka iyo Ciidanka Garowe ka jooga ugala soo bixi karay Magaaladaas si uu kaga nasto xag xagasho iyo culeeys uu kala kulmay siyaasiyiinta beesha Ciise Maxamuud.
Cabdikariim Xuseen Guled laftiisa ayaa fursad qaaliya u arkay dagaalka Galkacyo,wuxuuna ku qasbanaa inuu sii huriyo colaadda si Ciidanka iyo hubka ka yaal Cadaado uga qaato maadama uu culeeys kala kulmay Beesha Saleebaan Habargidir .
Madaxweynaha Galmudug Mr Guled wuxuu jilay riwaayad uu taageero badan uga helay Habargidir ,wuxuuna ku guuleeystay inuu hubkii Cadaado yaalay u rarto Galkacyo ,isagoo halkaas ka degay Madaxtooyo KMG ah.
Cabdiweli Gaas wuxuu Garowe ka soo kaxeeystay Ciidan lagu qiyaasay shan boqol oo askari kuwaas oo joogi doono Galkacyo maadama ay xiisado ka taagan yihiin sidoo kalena wuxuu soo rartay hubkii Garowe ka yiilay intiisa badan.
Riwaayad xiiso badan ayuu Majeerteen u jilay ,wuxuu ku dhawaaqay maalmo kooban ineysan marnaba aqoonsan doonin Galmudug,wuxuu isu muujiyay inuu galay xaalad dagaal oo halis badan hasse yeeshee ugu dambeeyn wuxuu soo gaaray ujeedkii uu lahaay ,wuxuuna Koofurta Galkacyo uga dhawaaqay inuu aqoonsan yahay Galmudug.
Cabdikariim Guled isagana wuxuu heeystaa jaanis uu beesha Habargidir iskaga sii jeediyo maxaa yeelay wuxuu ku faanayaa inuu Puntland ku sanduleeyay iney qasab ku aqoonsadaan Galmudug.taas oo aan waxba ka jirin balse aheyd qorshe hore loo degay.
Hadda sida muuqata labada beelood ee Puntland iyo Galmudug waa ku faraxsan yihiin heshiiska la kala saxiixday laakiin isweeydiintu waxeey tahay maxeey u dhinteen boqolaal qof oo aan waxba galabsan,maxaase loo barakiciyay kumanaan qoys oo guryahooda nabad ku deganaa?
Siyaasaddu waa nuucyo badan tahay waxeeyna mararka qaar kula gashaa inaad Aabahaa dishid si aan xilkiiisa ula wareegtid.